Wanda Nara oo si cad u sheegtay in xidigaha Icardi iyo Ronaldo ay hal koox ka wada ciyaari karaan – Gool FM
(Italy) 13 Maajo 2019. Wanda Nara oo ah xaaska iyo wakiilka weeraryahanka kooxda Inter Milan ee Mauro Icardi, ayaa xaqiijisay in wiilka reer Argantina uu awood u leeyahay ka garab ciyaarista xidiga Juventus ee Cristiano Ronaldo.
Hadalkan kasoo yeeray Wanda Nara ayaa yimid, kaddib markii la weydiiyay su’aal ahayd hadii ay Mauro Icardi iyo Cristiano Ronaldo ka wada ciyaari karaan hal koox waxayna ku jawaabtay:
“Haa..Way awoodaan inay ka wada ciyaaraan hal koox, mana jirto arin hor istaagi karta inay sidaas dhacdo”.
Balse Wanda Nara ayaa dhinaca kale meesha ka saartay in Icardi uu ka tagayo kooxda Inter Milan xagaagan, waxayna xaqiijisay inuu doonayo inuu kooxda sii wato, inkastoo uu khilaaf dhex maray laacibka iyo maamulka kooxda todobaadyadii la soo dhaafay.
Mauro Icardi ayaa lala xiriirinayay inuu ku biirayo kooxo waa weyn, sida Juventus, Real Madrid, Bayern Munich iyo Paris Saint Germain, laakiin Manchester United ayaa u muuqata kooxda sida xoogan u dooneysa inay hesho adeegiisa, sida laga soo xigtay saxaafada.
“Icardi wuxuu doonayaa inuu sii joogo kooxda Inter, waxaan damin doonaa taleefankeyga maalinta ugu horeysa ee suuqa kala iibsiga xagaaga, waxaa jiray dalabyo, balse Mauro wuxuu sii wadan doonaa Nerazzurri, waa intaas wax walba ee jira”.
“Kooxaha ugu fiican ayaa nala soo xiriiray, tababarayaasha ugu fiican ayaa doonaya inay la shaqeeyaan isaga, qof walbana waa uu doonayaa, laakiin Icardi ayaa aaminsan inuu sii joogi doono Inter, iyadoo aan loo eegi doonin magaca tababaraha xiga”.
Si kastaba Mauro Icardi ayaan si fiican u muuqnin xilli ciyaareedkan, sababa la xiriira dhibaatooyin badan ee ka heystay garoonka banaankiisa, wuxuuna u ciyaaray kooxda Inter Milan 34 kulan ee ah tartamada oo dhan, isgoo dhaliyey 16 gool.